Chọpụta ebe a akwụkwọ kacha mma nke Kate Morton, 2022
3 akwụkwọ Kate Morton kacha mma
Ọtụtụ bụ ndị edemede na -achọ nguzozi anwansi ahụ n'etiti ihe na ụdị, n'etiti ime ihe na ntụgharị uche, n'etiti isiokwu na nhazi nke na -emecha bulie ha n'ọkwa nke onye na -ere ahịa ụwa. Enwere ndị na -emecha bụrụ ndị isi nke esemokwu akụkọ dịka Joel dike na ọbịbịa ha na ọpụpụ ha site n'oge gara aga ruo ugbu a na ọdịnihu na -enyeghị gị ohere ka ị fuo na ntụgharị. Ndị ọzọ bụ nna ukwu nka nka nke akwụkwọ akụkọ gboo, dịka Ken Follett, ụfọdụ ndị ọzọ dị ka Stephen King na -ejikwa ọnyà anyị n'okpuru akpụkpọ anụ nwere ọmịiko.
Nke Kate morton ọ bụ omume ọma n'etiti di omimi na ịdị omimi nke nkata ahụ, n'etiti nhazi na ntụgharị uche nke ndị mkpụrụedemede ahụ hụrụ. Site na ijikwa nguzozi nke akwụkwọ ndị a na -ejikọ ọnụ nke ọma, mbipụta ọ bụla e welitere mechara mezie ya nke ọma. Maka na otu ihe doro anya bụ na otu esi akọ akụkọ dị mkpa karịa ihe a na -akọ.
N’afọ 2007 Akwụkwọ akụkọ mbụ nke Kate Morton, Riverlọ Riverton, yana ya na ihe ịga nke ọma ozugbo na ntughari zuru ụwa ọnụ nke mmetụta edemede Kate Morton, onye edemede na -abịakwute ụdị omimi ahụ site n'ọtụtụ sara mbara, yana ọtụtụ akụkụ ọhụụ na -eduga na -aga n'ihu na akwụkwọ akụkọ na -eju ndị na -agụ ya anya mgbe niile. nke ụwa niile.
3 Akwụkwọ akụkọ akwadoro Site n'aka Kate Morton
Grace Bradley bụ agadi nwanyị mara mma, nwere anya miri emi ma dị nro. Nne nne nke ị na -eche na mpịakọta ọ bụla nke wrinkles ya na -enweta ahụmịhe site n'oge dị anya.
Mana okwu Grace Bradley bụ nke nwanyị nke, n'oge ọ kacha nwayọ nwayọ n'ihu ọnụ ụzọ ọnwụ, kpebiri ịkọ akụkọ kachasị njọ na ndụ ya. Ọ ghọtara na ụzọ kachasị mma bụ ịgba akaebe ihe mere n'onwe ya, maka nwa nwa ya Marcus.
Yabụ na anyị na -abanye akụkọ dị egwu site na mbido narị afọ nke iri abụọ, nke nwere ikuku nke klaasị nke oge ahụ. Grace na -aga n'ụlọ Riverton ka ọ rụọ ọrụ. A na-atụgharị ihe na-eme site n'oge ahụ ka ọ bụrụ akụkọ akụkọ nwere mmụọ, na-agbagọ agbagọ n'okpuru ihe omimi ka ikuku nke narị afọ nke iri na itoolu na mmalite narị afọ nke iri abụọ.
Ogbugbu nke onye na -ede uri Robbie Hunter na -eduga anyị site ugbu a, nke a na -akwadebe akwụkwọ akụkọ banyere agwa ahụ n'oge gara aga, nke anyị na -achọpụta eziokwu niile gbasara ya ...
Ọ bụrụ na mpụta mbụ Kate Morton bụ ọkwa ọhụrụ kachasị ewu ewu na ụdị ihe omimi, akwụkwọ akụkọ a bipụtara afọ ole na ole ka e mesịrị wee tinye ya na akwụkwọ ndị ọzọ, na -eweghachi otu ihe ahụ dị n'oge gara aga dị ka ọdọ mmiri nke mmiri gbara ọchịchịrị n'okpuru nke eziokwu dị egwu na -ezo nke na -achọ. elu.
Nkwụsị nke obere Theo laa azụ na 1933 n'etiti ugwu na ndagwurugwu ọhịa bụ mmechi ụgha dị egwu nke akụkọ ihe mere eme nke ebe ahụ. A nụghị nwa ogbenye ahụ na iru uju gbasara wee mee ka ezinụlọ ya pụọ ​​ebe ahụ.
Sadie Sparrow bụ onye uwe ojii London nke na -etinye oge ezumike ya na -efunahụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Cornwall nke oke osimiri Celtic na -ama jijiji.
Anwansi nke ohere, dị ka ndọta ahụ a na -apụghị ịgbagha agbagha, na -eduga Sadie n'ime oghere jupụtara na nkuzi nke oge gara aga nke ndụ Theo kwụsịtụrụ na ejighị n'aka na ụjọ.
Ihe nzuzo ụbọchị ọmụmụ
Oge ikpeazụ Dorothy ghọrọ ala ọma jijiji gburugburu ihe nzuzo metụtara ezinụlọ dum na nke Dorothy n'onwe ya na -arụrịta ụka maka mkpa ya ka eziokwu wee pụta, na -akpaghasị ihe niile.
N'otu ụzọ, Laurel Nicholson na -esonyekwa na nzuzo dịka nwanne nwanyị nke okenye, n'ezie ọ bụ naanị ya nwere mkpịsị ugodi iji banye ebe ahụ n'oge gara aga ebe ezoro nkọwa nke yiri ka ọ na -enye nsogbu.
Ihe omimi a na -amalite site na 1961, mgbe Laurel bụbu nwata nwanyị nwere ihe ọmụma wee gbaba na ihe ndị mere. Laurel bụ onye na -eme ihe nkiri ugbu a nwere ogologo ọrụ yana mgbe ọtụtụ afọ gachara, ọ na -eche na ụbọchị ụbọchị ọmụmụ nne ya gara aga, ọ ga -enyocharịrị ihe kpatara ihe omume 1961 ahụ dị anya.
Ọ malitere ogologo oge tupu, laa azụ na 1941 na London. Nkata ahụ na -aga n'usoro nke nchọpụta Laurel na nwanne ya nwoke bụ Gerry, nrara mmadụ, ọdachi, nlanarị na ụfọdụ afọ siri ike na ọchịchịrị nke Agha IIwa nke Abụọ.
N'etiti akwụkwọ ochie na foto sitere n'oge ndị ọzọ, anyị na -ede akụkọ nke na -aza oke mkpa anyị nwere ịchọpụta ihe omimi nke ezinụlọ Nicholson.
5 kwuru na "akwụkwọ kacha mma 3 Kate Morton"
24/04/2022 na 5:13 mgbede
Ndewo, echere m na otu n'ime akwụkwọ kachasị mma nke Kate Morton bụ Ogige Echefuru, ebe ọ na-akpọrọ gị gaa n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ ebe a gbahapụrụ nwa agbọghọ ahụ na akụkọ a na-akọ site n'oge ahụ na-adọrọ mmasị, naanị otu m na-agụbeghị bụ. Ụbọchị ọmụmụ nzuzo.
25/04/2022 na 8:07 mgbede
Daalụ Magaly maka ntinye gị.
Pingback: Akwụkwọ atọ kacha mma Susanne Goga ›Jenụwarị 3
Pingback: Akwụkwọ kacha mma 3 nke Liane Moriarty ›Septemba 2021
Pingback: Chọpụta akwụkwọ kacha mma 3 nke Jane Harper ›Eprel 2021